ကျောင်းအတွက်တက်ဘလက် - ဘယ်တစ်ခုရွေးရမလဲ ulator Emulator.online ▷🥇
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကလေ့လာရန်အတွက်ကျောင်းစာအုပ်များကိုဆရာအားညွှန်ပြရန်လုံလောက်သည်။ ယနေ့အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းတက်သည့်လူငယ်များနှင့်လူငယ်များသည်အနည်းဆုံးတက်ဘလက်တစ်လုံးရှိရမည်၊ ၎င်းသည်မှတ်စုများရေးရန်၊ ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်အတူတကွလေ့လာရန်အချက်အချို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်အနည်းဆုံးတက်ဘလက်တစ်လုံးရှိရမည်။ ဆရာနှင့်အတူသော်လည်းဝေးကွာသောသင်ခန်းစာကိုစုစည်းရန် (သို့) ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များမှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအတွက်ပိုမိုအရေးကြီးသောဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တက်ဘလက်သည်ခေတ်သစ်ကျောင်းသား၏လေ့လာမှုလမ်းကြောင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမင်းတို့ပြမယ် ကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များ အွန်လိုင်းကို ၀ ယ်နိုင်မယ်၊ ဒါကြောင့်ပညာရေးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့မြန်၊ မြန်လွယ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသာရွေးချယ်နိုင်သည်။ လိုချင်ရင် ကျောင်းအတွက်တက်ဘလက်အသစ်ဝယ်ပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်စျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင်အမြဲတမ်းအကြံပြုထားသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကို ဦး စွာကြည့်ရှုရန်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာလိုက်ဖက်သောနှေးကွေး။ မဖြန့်နိုင်သောတက်ဘလက်များကိုမဝယ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။
အဖတ်ကိုလည်း: အကောင်းဆုံး Android Tablet - Samsung၊ Huawei သို့မဟုတ် Lenovo?
ကျောင်းအတွက်သင့်တော်သောတက်ဘလက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သာသင်ကြားခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်ထိုက်တန်သည်။ အချို့ဆရာများနှင့်ပါမောက္ခများသည်အတန်းတစ်ခုလုံးအတွက်တိကျသောပုံစံများချမှတ်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ဝယ်ယူမချခင်အမြဲမေးပါ။
မည်သည့်တက်ဘလက်ကိုမဆိုကျောင်းသို့မ ၀ ယ်မီ၊ အောက်ပါနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များစစ်ဆေးရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
Processor ကိုဖြေ - ကျောင်းရဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေစတင်နိုင်ဖို့အတွက် 2GHz quad-core ပရိုဆက်ဆာဒါမှမဟုတ်အစွန်းရောက်မွမ်းမံထားတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုအာရုံစိုက်ရမယ် (Octa-core CPUs နဲ့ဗားရှင်း) ။
ရမ်: လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များလည်ပတ်ရန်အတွက် 2GB RAM လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော်ကြီးမားသော application ၂-၃ လုံးကိုတောင်မှပြwithoutနာမရှိဘဲဖွင့်ရန် 2GB RAM ပါသောမော်ဒယ်များကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
internal memory- ကျောင်းမှတက်ဘလက်များသည်ကူးယူထားသောမှတ်စုများ၊ ဘရိုရှာများနှင့် PDF ဖိုင်များဖြင့်လျင်မြန်စွာဖြည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အနည်းဆုံး 32GB မှတ်ဉာဏ်ချက်ချင်းထားရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နေရာပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည် တိမ်တိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ် အကြီးဆုံးဖိုင်များကိုဘယ်မှာသိမ်းမည်နည်း။
ဖန်သားပြင်: မျက်နှာပြင်သည်အနည်းဆုံး ၈ လက်မရှိရမည်ဖြစ်ပြီး HD resolution ကိုထောက်ပံ့ပေးရမည် (အလျားလိုက်လိုင်း ၇၀၀ ကျော်) ။ မော်ဒယ်အများစုမှာ IPS နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖန်သားပြင်တွေပါရှိပေမယ့် Retina ကိုလည်း Apple မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်မှု- မည်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်သင့်တွင် dual-band ကြိုးမဲ့ module တစ်ခုလိုအပ်သည် အစာရှောင်ခြင်း5GHz ဆက်သွယ်မှု။ မည်သည့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန် Bluetooth LE ၏တည်ရှိမှုသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ SIM နှင့်မိုဘိုင်းကွန်ယက်ပံ့ပိုးမှု (LTE နှင့်နောက်ပိုင်း) ရှိမော်ဒယ်လ်များသည်စျေးကြီးပြီးပညာရေးအတွက်ဖြစ်သည် တစ် ဦး လုံးဝပို function ကိုဖြစ်ပါတယ်.
ကင်မရာများဖြေ - ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွေမှာရှေ့ကင်မရာရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့်ပြpeနာမရှိဘဲ Skype (သို့) Zoom ကိုသုံးနိုင်တယ်။ နောက်ကင်မရာရှိနေခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်ပြောင်းရန်စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများ scan.
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး- တက်ဘလက်များသည်စမတ်ဖုန်းများထက်ဘက်ထရီပိုကြီးပြီးပုံမှန်အခြေအနေတွင် ၆ နာရီမှ ၇ နာရီအထိလုံခြုံစွာရောက်ရှိနိုင်သည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ - သင်ပြသမည့်တက်ဘလက်အားလုံးနီးပါး Android ကို operating system တစ်ခုအဖြစ် ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသိပ်မလျှော့သင့်ဘူး iPadOS နှင့်အတူ iPadsအမြန်မြန်ဆန်ပြီးမကြာခဏလိုအပ်သောစနစ် (အချို့ဆရာများက iPads ကိုသင်ကြားရေးကိရိယာများအနေဖြင့်အထူးတောင်းဆိုလိမ့်မည်) ။
ကျောင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောတက်ဘလက်တစ်လုံးရှိသင့်သည့်ဝိသေသလက္ခဏာအချို့ကိုအတူတကွတွေ့မြင်ပြီးနောက်မည်သည့်မော်ဒယ်များကိုသင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ကိုချက်ချင်းကြည့်ကြပါစို့၊ ဈေးအပေါဆုံးနှင့်အကွာအဝေး၏ထိပ်အထိဖြစ်သည်။ ကျောင်းအတွက်တက်ဘလက်တစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသောပထမဆုံးမော်ဒယ်ကား မီး HD 8Amazon တွင်ယူရို ၁၅၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
ဒီစျေးပေါတဲ့ tablet မှာ ၈ လက်မ IPS HD မျက်နှာပြင်၊ quad-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 8GB RAM၊ 2GB သိုလှောင်နိုင်သည့် internal memory၊ အားသွင်းရန် USB-C ထည့်သွင်းမှု၊ ရှေ့ကင်မရာ၊ နောက်ကင်မရာ၊ ၁၂ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပိုင်ရှင်အခြေပြုလည်ပတ်မှုစနစ် Android တွင် (Play Store မပါဘဲ Amazon App Store နှင့်ပါ) ။
Play Store ကိုကျောင်းတက်ဘလက်ပေါ်မှာလိုချင်ရင်လေ့လာမှုအတွက်လျှောက်လွှာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရရင်၊ တက်ဘလက်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်တယ် Samsung Galaxy Tab A7, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
Samsung တက်ဘလက်တွင် ၁၀.၄ လက်မမျက်နှာပြင် resolution 10,4 x 2000 Pixel၊ octa-core ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM 1200 GB၊ တိုးချဲ့နိုင်သော internal memory3GB၊ dual-band Wi-Fi၊ အလိုအလျောက်ဟော့စပေါ့၊ ရှေ့ကင်မရာ၊ အနောက်ဘက်တွင် 32 mAh ဘက်ထရီနှင့် Android 7040 လည်ပတ်မှုစနစ်။
ကျောင်းသုံးရန်သင့်တော်သည့်နောက်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည် Lenovo Tab M10 HD, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
ဒီတက်ဘလက်မှာ ၁၀.၃ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်၊ MediaTek ပရိုဆက်ဆာ၊ 10,3GB RAM၊ Internal Memory 4GB၊ WiFi + Bluetooth 64၊ အထူးအသံစပီကာများပါတဲ့ dock၊ Alexa voice assistant နှင့် ၁၀ နာရီဘက်ထရီတို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကြာချိန်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် (သို့မဟုတ်ဆရာများကအက်ပဲလ်ထုတ်ကုန်ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်) ရောင်းလိုလျှင်၊Apple iPad, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
Apple ထုတ်ကုန်များနည်းတူ၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး ၁၀.၂ လက်မ Retina display၊ Neural Engine ပါသည့် A10,2 ပရိုဆက်ဆာ၊ Apple Pencil နှင့် Smart Keyboard ကိုထောက်ပံ့သည်၊ 12 MP နောက်ကင်မရာ၊ Wi-Fi ၏ dual band၊ Bluetooth 8 LE၊ ၁.၂MP Front FaceTime HD ဗွီဒီယိုကင်မရာ၊ စတီရီယိုစပီကာနှင့် iPadOS လည်ပတ်မှုစနစ်။
iPad ရိုးရှင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိပါကအိတ်ဆောင် mini PC ကိုအရာရာတိုင်းကိုလုပ်စေချင်လျှင်၊Apple iPad Pro, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
ဒီတက်ဘလက်မှာ ၁၁ လက်မ Liquid Retina Display တပ်ဆင်ထားပြီး ProMotion နည်းပညာပါ ၀ င်သည်။ Ne11M အင်ဂျင်ပါ ၀ င်သည့် A12Z Bionic ပရိုဆက်ဆာ၊ အကျယ်ထောင့်နောက်ဘက်ကင်မရာ 12MP၊ 10MP Ultra-wide ထောင့်၊ LiDAR စကင်နာ၊ 7MP TrueDepth ရှေ့ကင်မရာ၊ Face ID စပီကာလေးအသံ၊ 802.11ax Wi-Fi6operating system နှင့် iPadOS အသစ်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ပုန်းများသည်မူလတန်းကျောင်းမှကောလိပ်အထိမည်သည့်လေ့လာမှုအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဈေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်များတောင်မှ ၄ င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပေါ့ပါးခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းတို့အတွက် iPad (စီးပွားရေးအခြေအနေကခွင့်ပြုသည့်အခါ) ကိုအာရုံစိုက်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုသည်။
သင်က built-in ကီးဘုတ်ပါသည့်တက်ဘလက်များကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ဖယ်ရှားနိုင်သောကီးဘုတ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး 2-in-1 Tablet-PC mi Tablet အတွက်အကောင်းဆုံး Windows 10 Laptops Convertible။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရာမှတ်စုစာအုပ်ကပေးသောစွမ်းအားနှင့်သက်တောင့်သက်သာမှုကိုမစွန့်လွှတ်ပါကလမ်းညွှန်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ကျောင်းသားများအတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်စုစာအုပ်.
console မပါဘဲ PS5 ဂိမ်းများကိုဘယ်လိုကစားမလဲ
Mac, PC, TV Box နှင့် NAS ကဲ့သို့ Mac Mini ကိုသုံးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်
PS5 ကဘယ်လိုလဲ။ အသစ်က Playstation ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လမ်းညွှန်
Huawei နဲ့ Xiaomi: ဘယ်သူ့ကိုမှအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေထုတ်လုပ်တာလဲ။
နေရာအနည်းငယ်ယူသည့်အကောင်းဆုံး All-In-One PC များ
Bluetooth အသံပါသည့်မျက်မှန်များ၊ နေကာမျက်မှန်များအတွက်မဟုတ်ပါ
box ထဲကဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံး desktop ကွန်ပျူတာများ